Wafdi ka qeybgelaya shir oo maanta gaaray Garbahaarrey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa Maanta magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo gaaray wafdi isugu jira Siyaasiyiin, Saraakiil iyo Hoggaamiyayaal dhaqan kuwaas oo ka qeyb gali doona shirweynaha wadatashiga dadka dagan gobolka Gedo oo dhawaan ka furmi doona magaalada Garbahaareey.
Wafdiga ayaa waxaa ku soo dhaweeyay magaalada Garbahaareey masuuliyiinta gobolka, Ururada Bulshada Rayidka, iyo Ardayda magaalada, waxana ay kula hadleen dadweynaha fagaare ku yaala bartamaha magaalada Garbahaareey, waxana ay tilmaameen shirkani uu noqon doono mid si wadajir ah ay dadku uga tashan doonaan aayahooda.
Guddoomiyaha degmada Garbahaareey Iimaan Cadow Kaarshe oo la hadlayay dadweynaha ayaa uga mahadceliyay xubnaha wafdiga safarka ay kusoo gaareen magaalada Garbahaarey, wuxuuna dhinaca kale rajo ka muujiyay qabsoomida shirka wadatashiga ah ee bulshada gobolka isugu imaan doonto.
Sheekh Maxamed Yuusuf “Awlibaax” oo u hadlay xubnaha wafdiga ayaa sheegay ujeedka ay usoo gaareen magaalada in ay tahay sidii midnimada dadka gobolka Gedo looga wada qeyb qaadan lahaa isla markaana wadajir loo wajihi lahaa ka qeyb qaadashada shirarka dib-u-heshiisiinta ee ka dhici doona Kismaayo iyo dhamaystirka maamulka KMG ah ee Jubba.
Sidoo kale waxa Goobta ka hadlay qaar kamid ah odayaasha dhaqan ee wafdiga la socday, waxana ay dhammaantood tilmaameen ahmiyadda uu shirku u leeyahay bulshada ku dhaqan gobolka Gedo.
Dhanka kale waxaa la filayaa in Saacadaha soo socda ay gaaraan magaalada Garbahaareey xubno kale oo isugu jira Xildhibaan, Saraakiil iyo Siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka Gedo.
Shirkaan la sheegay in lagu qabanayo magaalada Garbahaarrey ayaa waxa wada qolooyin ka horjeeda shirka dib u heshiisiinta Jubooyinka iyo Gedo oo todobaadkii tegay ka furmay Kismaayo.